Ciidamada Al Shabaab Oo la wareegay Hoteelka Cascaseey ee Magaalada Kismaayo.
Friday July 12, 2019 - 20:08:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sii xoogeystay weerarkii xooganaa ee maanta gelinkii dambe ka bilaawday gudaha magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose.
Weerarka oo ku billaawday qarax ka dhashay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay waxaa xigay dagaalyahanno hubeysan oo gudaha ugu daatay Hoteelka Cascaseey oo kamid ah Hoteellada ugu waaweyn magaalada xeebta Kismaayo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalyahanada Al Shabaab ee weerarka qaaday ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta hoteelka oo ah mid amnigiisa si aad ah loo ilaaliyo waxaana deganaa saraakiil katirsan maamulka 'Jubbaland' iyo siyaasiyiin.
Jugta qaraxyo iyo jabaqda rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa Hoteelka uu dagaalku ka socdo, magaalada Kismaayo waxaa ku sugan kumanaan askari oo ka socda dowladaha Kenya iyo Itoobiya sidoo kale waxaa garoonka Kismaayo saldhig ku leh ciidamada dowladda Mareykanka.
Wixii soo kordha dib ayaan kasoo sheegi doonaa insha'Allaah
Ciidamada AMISOM oo qof Shacab ah ku dilay deegaanka Buurane.
Xabaal Wadareedyo Boqolaal qof ku aasanyihiin oo laga helay magaalada Tarhuuna.
Ciidamo hubaysan oo qabsaday xarun wasaaradeed oo kutaal magaalada Boosaaso.
Melleteriga Azarbijaan oo dagaal kula wareegay magaalo muhiim ah.
Hooyo wilkeeda laga xaday oo ku waalatay magaalada Muqdisho [dhageyso].
Al Shabaab oo si kooban ula wareegay deegaanno ku dhow Dhuusamareeb.
Dagaal 25 askari looga dilay ciidamada dowladda oo ka dhacay Sh/hoose.
Qarax ciidamada AMISOM lagula beegsaday deegaan katirsan Sh/hoose.